Koree araaraa Mootummaa fi ABO: Waraanni baay'inaan gaaffii siyaasaa kaasan - BBC News Afaan Oromoo
Koree araaraa Mootummaa fi ABO: Waraanni baay'inaan gaaffii siyaasaa kaasan
Haala waraana waamicha abbootii gadaa simachuun dhufan miseensonni koree araaraa dhaqanii hubachuu isaanii beeksisan.
Torban darbe miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) akkaataa keessa jiranii fi dhimmoota garagaraa mormuun nyaata lagatanii turan. Koreen araaraas kaampii dhaqee isaan daawwachuuf eeyyama mootummaarraa akka hinarganne gabaasnee turre (as cuqaasaa).
Koreen kuni dheengadda Sambata Xiqqaa waraana waliin wal arguu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, miseensi koree kanaa Obbo Baqqala Garbaa BBC Afaan Oromootti ganama kana (Wiixata) akka dubbatanitti miseensonni kuni haala gaariirra jiru.
Yeroo wal arganis koreen akka jedhutti miseensonni duraanii WBO Xollaay jiran komii osoo hin taane gara caalu gaaffii siyaasaan walqabate gaafatani.
Hedduun isaaniis kan gidduu kana ijoo dubbii ta'an keessa jiru.
''Gaaffiin isaan kaasan tokkichi bakkisaa ni ho'aa, bakki nuuf jijjiiramu qaba kan jedhudha,'' kan jedhan Obbo Baqqalan ''akka achi geenye mirkaneeffannetti qabinsi isaanii gaarii ta'u isaati kan hubanne,'' jedhaniiru.
Wiirtuu sanatti nyaata leenji'aa tokkof dhihaatu dhihaataafi akka jirullee koreen kuni hima. Uffata leenjiitti uffataniifi bakki bashannanaa qophaa'aafi akka jirullee beeksisaniiru.
Torban darbe miseensonni duraanii Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) nyaata dabalatee, eegumsa, fayyaa akkasumas haala jireenyaa komachuun nyaata lagachuu isaanii dubbatani ture.
Obbo Baqqalaan garuu wanti isaan quba qaban koree arguu dhabuu isaaniin nyaata lagachuu isaanii akka ta'e BBC'tti himaniiru.
Koreen guyyaa dheengaddaa guyyaa guutuu waraana waliin oole. Waraannis, koreenis kanaan gammachuu akka qabu Obbo Baqqalaan himaniiru.
Miseensi WBO duraanii yeroo ammaa Xollaay jiru, Mohaammad Adam, koree waliin mari'atanis gaaffii kaasan keessaa 'yartuu deebisani,' jedheera.
Haala qilleensaa ilaalchisuun, ''Iddoo mootummaan jedhe Xollaay waan ta'ef yoo isinii ta'e hin teessu yoo isinii ta'u baate furmaata itt gaafanna,'' nuun jedhaniiru jechuun dubbata.
Gama nyaataanis bosona yeroo turan ummatarraa waan gaarii akka dhihaatuufi qilleensa gaha akka argatan kaasuun bakka amma jiran mijataa akka hin taane hima.
Gama kaaniin, waraanni Xollaay jiru guyyaa har'aa leenjii eegaluu isaanii BBC'tti himeera.
Torban darbe waraana dhaqne akka hin dubbisne mootummaatu nu dhorke jechuun koreen beeksise ture. Isa duras gaafa tokko balbala gahani deebi'ani turan.
Gaafa Jimaata darbe garuu dhaqaa dubbisaa jedhamuu isaanii himu.
Kunis, 'erga dhaqnee daawwachuu hin dandeenye' Gumiin Abbooti Gadaa hojii dhaabna jedhe waamicha yeroo dhiheessuuf jedhu akka ta'e dubbatu.
Koreen kun waraanni deebi'uf fedhii osoo qabu haalli hin mijatinif ni jira, kan yeroon jalaa gabaabbate jira akkasumas guyyaa ijibbaataa hin fayyadamne jechuun guyyoota dabalataa 30 mootummaa gaafateera.
Ammallee deebii mootummaa akka eegaa jiranidha kan BBC'tti himan.
''Dhaqnee ilaalla kan jedhu abdii qabna. Mootummaanis lammata nu dhowwaa jennee hin yaadnu'' kan jedhan Obbo Baqqalaan torban muraasa booda waraana waamicha isaanii fudhate Xoollay jiru deebi'ani arguu barbaadu.
Daawwannaa MM Abiyyiifi Obbo Lammaa Begiitti taasisaniin ummanni gammadu hime